Turkiga ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto dib u dhiska dekedda Beirut… – Hagaag.com
17 Seteembar 2020 in English // Russia announces troop build-up in Far East…
17 Seteembar 2020 in Sports // Xiddigta ciyaaraha kubada koleyga Mareykanka Maya Moore ayaa guursatay nin ay xabsi ka soo…
17 Seteembar 2020 in National // War-murtiyeed laga soo saaray shirkii Mogadishu ay ku lahaayeen Madxada DF iyo Dowladaha XDF…
17 Seteembar 2020 in English // EU diplomacy on Turkey runs aground ahead of summit, envoys say…
Turkiga ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto dib u dhiska dekedda Beirut…
Posted on 9 Agoosto 2020 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweyne ku xigeenka Turkiga Fuat Oktay ayaa jeediyey hadal kadib kulan uu la qaatay Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun waxa uu sheegay in wadankiisu uu diyaar u yahay in uu gacan ka geysto dib u dhiska dekedda Beirut.
Dekedda Mersin ee Turkiga, ee ku taal badda Mediterranean ayuu sidoo kale sheegay in ay diyaar u tahay in ay Lubnaan ka caawiso adeegyada kastam-ka iyo keydinta shixnadaha waaweyn illaa Dekadda Beirut dib looga dhiso.
“Waxaan u sheegnay in badeecadaha looga soo daabuli karo Mersin ilaa Lubnaan maraakiib yar yar iyo qaabab kale oo gaadiid ah,” ayuu yiri.
Oktay waxa kale oo uu hadalkiisa ku xusay in diyaarada ambalaasyada ah ee Turkigu ay dadka dhaawacyada ah u qaadi karaan Turkiga si halkaasi loogu soo daweeyo. Mas’uuliyiinta Turkiga ayaa u diray Lubnaan koox caafimaad, saanad iyo sidoo kale koox howlaha baadi goobka iyo badbaadinta gacan ka geysata.
Dhanka kale, Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Aboul Gheit ayaa Sabtidii sheegay in uu doonayo in uu abaabulo dadaallada wadamada Carabta oo taageero la siiyo dalka Lubnaan ka dib qaraxii musiibada ahaa ee todobaadkan ka dhacay magaalada Beirut oo burburiyey qaybo ka mid ah caasimadda.
Isaga oo lahadlayay suxufiyiinta kadib kulan uu la qaatay Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayuu Aboul Gheit sidoo kale sheegay in Jaamacadda Carabta oo fadhigeedu yahay magaalada Qaahira, kulmisana dalalka Carabta ay diyaar u tahay in ay gacan ka geysato baaritaanka sababta dhalisay qaraxan.
“Waxaan diyaar u nahay in aan kaalmayno wixii awoodeenna ah,” ayuu yiri, isagoo intaa raaciyay in uu ka qeybgali doono shirar caalamiga ah oo uu ku baaqay Faransiiska oo maalinta Axadda ee berri looga hadlayo gargaar loo fidiyo dalka Lubnaan.
Qaraxa waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 5,000 oo kale, halka ilaa 250,000 qofna uu dhigay guryo la’aan. Qaraxyada ayaa ka dhacay bakhaar ku yaal dekedda oo ay ku keydsanaayeen 2,750 ton oo ah maaddada ammonium nitrate ee loo adeegsado bacriminta iyo walxaha qarxa.
Musiibada ayaa dhacday waqti ay Lubnaan la halgameyso dhibaato baahsan oo dhaqaalo xumo ah.
Dowladaha Khaliijka Carabta ee hodanka ku ah saliidda, kuwaasi oo muddo dheer gacan siin jiray si ay u kabaan dhaqaalaha liita ee Lubnaan ayaa muddooyinkii danbe ka gaabsaday in ay bixiyaan kaalmada maaliyadeed, iyagoo ka cabsi qaba saameynta sii kordheysa ee kooxda Xisbullah, oo ah koox awood badan oo taageera ka hesha dalka Iran.
About Admin (11368 Articles)
Russia announces troop build-up in Far East…
EU diplomacy on Turkey runs aground ahead of summit, envoys say…